मेरा पुस्तकालयहरू - कोसेली - कान्तिपुर समाचार
वैशाख ९, २०७४ रोशन शेरचन
पुस्तकालयजस्तो सार्वजनिक संस्थालाई मेरो भन्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन। तर त्यो शब्द चयनको पछाडि एउटा कारण छ।
जीवनका कुइनेटाहरूमा सहयात्री पुस्तकालयहरूको सम्झना गर्दा त्यसमा म अत्यन्त वैयक्तिक स्पर्श भेट्छु। तसर्थ ‘मेरो’ शब्द नै छानें। अपनत्वको अर्थमा। महाकवि देवकोटाले मुनामदनमा ‘ईश्वर तैंले रचेर फेरि कसरी बिगारिस्...’ लेख्दा ईश्वरलाई निकट मानेरै ‘तैंले’ शब्द प्रयोग गरेका हुन् कि? निकट हुँदा सम्बोधन बोसोरहित हुँदै अनौपचारिक बन्दो रहेछ। खैर, पुस्तकालयको अनुभव लेख्न बस्दा सिसेरोको भनाइ सम्झिरहेको छु ‘यदि तिमीसँग बगैंचा र पुस्तकालय छ भने, जीवनमा चाहिने सबै चीज तिमीसँग छ।’ जिससभन्दा झन्डै १०६ वर्षअघि जन्मेका यी रोमन दार्शनिकले पुस्तकालयको महत्त्वलाई उहिल्यै बुझेको देखिन्छ। बगैंचा नभएकाले, म त्यसको कल्पना मात्र गर्न सक्छु। तर पुस्तकालयको हकमा सिसेरो सही भएको मेरो अनुभवले पनि भन्छ।
घर, डेरा, स्कुल, मित्रता, सम्बन्ध, सिनेमाझैं हामी कैयनले जीवनमा पुस्तकालयको महत्त्व अनुभव गरेको हुनुपर्छ। अनेकौं स्मृतिहरूमा यौटा स्मृतिको त्यान्द्रो पुस्तकालयसँग जोडिएको छ। सरदर दुईतिहाई समययात्राको थुम्कोबाट विगत नियाल्दा पुस्तकालयको रोमाञ्चक र मुग्ध पार्ने संसार देख्छु। विविध। बहुरूप। पुस्तकालयसँगको मेरो सहयात्रा सकिने संकेत छैन। जीवनसँगै मात्र सकिने देख्छु। तर पुस्तकालयका नोस्टालजिक यादहरू क्रमश: धमिलिँदै गएका छन्। तर सबै विस्मृतिको गर्तमा विलुप्त भइसकेका छैनन्। विलुप्त भइनसकेका केही संस्मरणहरू यहाँ लेख्दै छु।
यात्रा एक : गण्डकी पुस्तकालय
विसं २०३१ सालमा पोखराको नेपाल आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना हुँदा पुस्तकालयको नयाँ संसारमा प्रवेश गर्दै छु भन्ने थाहा थिएन। फुच्चे उमेरमा थाहा हुने कुरै भएन। अहिलेको गण्डकी बोर्डिङ स्कुल। दुई, तीन कक्षाको विद्यार्थी हुँदासम्म पुस्तकालय कहाँ थियो? याद छैन। यू आकारको मुख्य भवन बनेपछि भने मध्यभागको पहिलो तलामा पुस्तकालय बन्यो। लोकप्रिय साप्ताहिक ‘नयाँ सन्देश’ पहिलोपटक त्यहीं पढेको सम्झन्छु। नयाँ सन्देशको मीठो शीर्षकको चुट्किला र कार्टुनिस्ट बराथा (?) ले बनाएको कार्टुन मन पथ्र्यो। निकै हाँसिन्थ्यो।
सस्तो सामाजिक उपन्यासको बानी यही लाग्यो। युधीर थापासँग जम्काभेट भयो। थापाको ‘कक्टेल्स’, ‘हुरीको लहर’, ‘झरनाको मीठो पानी’, ‘फेरि कहिले भेट होला’, ‘सिंगमरमरको ढुंगा’ पढें र हिरिक्कै भएँ। प्रकाश कोविदको ‘अर्को जन्म’ र ‘देउता’ पनि पढें। थापाभन्दा थोरै माथिको उपन्यासकार। अतिशय भावुक पुस्तक। त्यस बेला महान् लाग्थ्यो। कलिलो मस्तिष्कलाई तिलस्मी दुनियाँमा पुर्‍याउने उपन्यास भने ‘विरचरित्र’ र ‘विरसिक्का’ थियो। पाँच वा छ कक्षामा पढें। ऐय्यरहरूको अदभुत दुनियाँ। विकट पश्चिमी क्षेत्रहरूको सेटिङ। अहिले फेरि पढ्न मन छ। तर कहाँ पाउने? ‘क्लियोपेट्रा’ को नेपाली अनुवाद पढेर त्यसले उत्पन्न गरेको प्रभाव अलिअलि सम्झन्छु। सायद सात कक्षामा।
त्यस्तै लेडिबर्ड प्रकाशनको अंग्रेजी कथाहरूको पनि मधुरो सम्झना छ। ‘जिन्जरब्रेड मेन’, ‘थ्री लिटल पिग’, ‘सिन्ड्रेला’, ‘स्नो ह्वाइट’। मन नै उदास बनाएको कथाचाहिँ ‘पिनकियो’ थियो। त्यसको नेपाली अनुवाद पढेथें। गरिब वृद्ध सिकर्मीले काठको बालक बनाउँछ। वृद्धको बुढेसकालको नियास्रो मेट्न परीले आशीर्वाद दिन्छ र उनलाई सजीव बनाइदिन्छ। सिकर्मी प्रसन्न हुन्छ। पिनकियो निर्मल हृदयको बालक हुन्छ। एकपटक उसलाई सर्कसको दयालु मान्छेले सुनका केही सिक्का दिन्छ। ऊ सोच्छ, अब दु:खका दिन सकिए। र, खुसी हँुदै हतार–हतार घर फर्किरहेको हुन्छ। बाटामा धुर्त बिरालो भेटिन्छ। सुनको सिक्का छ भन्ने थाहा पाएपछि बिरालोले जुक्ति निकाल्छ। पिनकियोलाई भन्छ, ‘मलाई सुन फल्ने रूख बारे थाहा छ, तिम्ले त्यहाँ सिक्का रोप्यौ भने सुनको सिक्का फल्छ।’ सुधो पिनकियोले पत्याउँछ। माटोमा सिक्का गाड्छ। तर राति एक्लै गई बिरालोले खोस्रेर सुनको सिक्का दमपच पारिदिन्छ। कथाको यो मोडमा म निकै दु:खी बनेको थिएँ। पिनकियो र गरिब सिकर्मीको अवस्था सोचेर द्रवित भएको थिएँ।
‘नेसनल जियोग्राफी’ पत्रिका हेरिन्थ्यो। पाठ त के बुझ्नु? चित्रहरूमा आकर्षित हुन्थें। त्यसको कागजबाट मीठो बास्ना आउँथ्यो। त्यो बास्ना अझै मेटिएको छैन, स्मृतिपटबाट। अहिले पनि नेसनल जियोग्राफी पाए पाना सुँघ्न छाड्दिनँ। अर्को कथा, मार्क ट्वेनको ‘एडभेन्चर अफ टम सायर’। मनलाई रोमाञ्चित पार्ने कथा। निधारमा बल पार्ने हो भने, अन्य पुस्तकको नाम पनि सम्झन सकिन्छ। तर उल्लिखित पुस्तकहरू सम्झनामा गढेर बसेका रहेछन्। बल नपार्दै स्मृतिपटमा आउने। मेरोनिम्ति गण्डकी पुस्तकालयका झ्याल, ढोका र भित्ताहरू यिनै पुस्तकहरूको योगले बनेका रहेछन्। त्यो पुस्तकालयको आँखीझ्यालबाट पहिलोपटक मैले किताबको संसारतिर चियाएको रहेछु।
यात्रा दुई : सिद्धार्थ पुस्तकालय
छुट्टीमा भैरहवा जाँदा भने सिद्धार्थ पुस्तकालयको भर पर्थें। पेडाको निम्ति प्रसिद्ध पवन मिष्ठान्न भण्डारको बाटो हुँदै पूर्वतिर मोडिएपछि करिब पचास, साठी मिटरमा सिद्धार्थ पुस्तकालय देखिन्थ्यो। पवन मिष्ठानबाट गुज्रिँदा डढेको दूधको मीठो बास्ना आउँथ्यो। त्यो बास्ना अझै उडेको छैन। पुस्तकालय सामान्य थियो। एकतले। सिद्धार्थ नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको थियो क्यार। धेरै पुस्तकहरू थिएन। लस्करै राखिएका काठका टेबलहरूमा समाचार पत्रिका र म्यागाजिनहरू यत्रतत्र छरिएका देखिन्थे। त्यही खातंमा म ‘दैनिक जागरण’, ‘आज’, ‘नवभारत टाइम्स’, ‘इलस्ट्रेटेड विक्ली’, ‘साप्ताहिक हिन्दुस्तान’ खोज्थें। त्यस्तै ‘सरिता’, ‘मुक्ता’, ‘कादम्बिनी’, ‘धर्मयुग’, ‘दिनमान’। बेताल, मैन्ड्रेक्स, चाचाचौधरी र बहादुरका कमिक्सहरू पनि। आज र दैनिक जागरण गोरखपुर भारतबाट निस्कन्थ्यो। गोरखपुरको तेह्रवटै सिनेमाघरमा चलेको लेटेस्ट सिनेमाको सूची त्यसमा हुन्थ्यो। ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट चित्रसहित। त्यो छुटाउँदैनथें। सिनेमाको कीरो जो थिएँ। भारतमा रिलिज भएको महिनौं, वर्षौंपछि मात्र नेपालमा भित्रिने जमाना थियो त्यो। अर्को प्राथमिकतामा पत्रिकाको कार्टुन पथ्र्यो। आरके लक्ष्मण र सुधीर तैलङ्गको कार्टुन सम्झन्छु। मेरा साथीहरू नभएकाले सिद्धार्थ पुस्तकालय नै साथी बनेको थियो। पोखरा पढ्थें त्यसताका। भैरहवा बिदाको घरजस्तो मात्र थियो। भैरहवामा धेरै गर्मी हुनाले दिउसो घरै बस्थें। दुई–तीन बजेतिर निस्कन्थें र पाँच बजेतिर फर्कन्थें। विसं २०३७ देखि ०४० सम्म सिद्धार्थ पुस्तकालयको म नियमित प्रयोगकर्ता थिएँ। त्यस बेला पुस्तकालय लोकप्रिय थिएन। भरिभराउ मान्छे मैले कहिल्यै देखिनँ। प्राय: रित्तो। पानपसलमा बरु सधैं भीड देखिन्थ्यो।
यात्रा तीन : हेटौंडा पुस्तकालय
विसं २०४२–२०४४ मा हेटौंडा वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा रेन्जर कोर्स पढ्दा उक्त पुस्तकालय मेरो साथी बन्न पुग्यो। साँझको समय खेलकुद खेल्नुपर्ने क्याम्पसको नियमअनुसार प्रायश: फुटबल खेलिन्थ्यो। पुस्तकालय कहिलेकाहीं मात्र पुग्थें। डीएफओ कोर्स पनि हेटौंडामा नै भएकाले क्याम्पस परिसरमा दुईवटा पुस्तकालय थिए। यदाकदा डीएफओ पुस्तकालयमा छिर्थें। पुस्तक पढेको खासै सम्झना छैन। समाचार पत्रिका र वन विज्ञानसम्बन्धी म्यागाजिन हेरेको, पढेको चाहिँ सम्झन्छु। ‘सन म्यागाजिन’ चाहिँ छुटाउँदैनथें। सन म्यागाजिनको मध्यपृष्ठमा गायकहरूको पोस्टर हुन्थ्यो। सिलभेस्टर स्टालनको र्‍याम्बो शृंखलाले तहल्का मच्चाएको समय थियो। भिडियोको व्यावसायिक प्रदर्शन घनघोर चरणमा रहेकाले बरु साथीहरूसँग कहिलेकाहीं भिडियो हेर्न गइन्थ्यो। हेटौंडा पुस्तकालयसँग कमै सहयात्रा गरें।
यात्रा चार : अमेरिकन लाइब्रेरी
फराकिलो पुस्तकको संसार भने मैले काठमाडौंमा भेटे। विसं २०४४ मा। रेन्जर कोर्स गरेपछि काठमाडौं जिल्ला वन कार्यालयमा रेन्जर भई काम गरें। अफिस अमृत क्याम्पस नजिक थियो। फिल्ड थानकोटको नर्सरी। लाइब्रेरी नयाँ सडकको मध्यभागमा थियो। अहिले त्यहाँ एभरेस्ट बैंकको भवन छ। एक दिन अमेरिकन लाइब्रेरी छिरें। सायद कसैसँग गएको थिएँ। अमेरिकी भाषा केन्द्रमा अंग्रेजी सिक्दा बनेको साथीसँग हो क्यार। लाइब्रेरी एक्सक्ल्युसिव थियो। संकोचै लाग्ने। त्यहाँ भएका सप्पै विद्वान्जस्ता देखिने। अंग्रेजीमा दख्खल भएका। र्‍याकमा अनगिन्ती किताबहरू मिलाएर राखिएका देखिन्थे। म भने मोटा चिप्लो कागज भएका पुस्तकको चित्रहरू हेर्थें। ‘टाइम्स’, ‘न्युजविक’, ‘एसियाविक म्यागाजिन’ को आर्ट, लिटरेचर र सिनेमा खण्ड धेर हेर्थें। लाइब्रेरी आउजाउ गर्न सहज हुँदै गएपछि एक दिन लाइब्रेरियनलाई सोधें, ‘सदस्यता लिन के गर्नुपर्छ?’
सदस्य बनेपछि सबभन्दा पहिला वेस्टर्न क्लासिक ल्याएँ। र, थानकोट नर्सरीमा युकलिप्टसको रूखमुनि ज्याक सेफरको उपन्यास ‘सेन’ सक्काएँ। प्रायश: वन नर्सरीमै बिताउँथे। तीन जनाको टिम। ‘सेन’ धेरै वर्षपछि मात्र हेर्ने मौका मिल्यो। ‘सेन’ हलिउडको शोलेजस्तो मानिन्छ। भनिन्छ, भर्खर रिलिज भएको ‘लोगान’ सेनबाट प्रभावित छ। जोन स्टेनवेकको ‘द ग्रेप अफ र्‍याथ’ र ‘अफ माइस एन्ड मेन’ पढें। ‘द ग्रेप अफ र्‍याथ’ सन् ३० को अमेरिकाको ग्रेट डिप्रेसनको पृष्ठभूमिमा रचिएको उपन्यास। बसाइ–सराइ र बाँच्ने उपक्रममा गर्नुपर्ने जीवनसंघर्षमा बुनिएको आख्यान। मार्गरेट मिचेलको मोटो उपन्यास ‘गोविङ विथ द विन्ड’ पनि पढें। यो सक्काउँदाचाहिँ विजेताझैं अनुभव गरें। अमेरिकी गृहयुद्धको विशद् क्यान्भासमा पोतिएका दर्जनौं पात्रहरू भएको त्यो उपन्यास सक्काउन मलाई हम्मे परेको थियो। सक्काएरै जित्नैपर्छ भन्ने भाव पलाएको थियो। कस्तो अहम् भाव? अहिले सोच्दा विचित्र लाग्छ।
अमेरिकी लाइब्रेरीमै मैले पहिलोपल्ट साल्भाडोर डालीको कलाकृति पग्लिएको घडी (परसिसटेन्ट अफ मेरोरी) देखें। र, अचम्मको मनोदशामा आफूलाई पाएँ। विस्मय अनुभूतिको त्यो तीव्रता मैले पहिला सायदै अनुभव गरेको थिएँ। थाहा पाएँ, त्यस्तो चित्रकारितालाई सररियालिस्ट भनिँदो रहेछ। अहिले त सररियालिस्टिक लेखन नेपालमै लोकप्रिय जन्रा बनिसक्यो। सो विधालाई पाठकवृत्तमा स्थापित गर्ने लेखक कुमार नगरकोटीलाई नेपाली साहित्यको डाली भन्न सकिन्छ। एक दिन लाइब्रेरीको सजावट केही फरक देखिन्थ्यो। केही चेयर, हरेक चेयरमा हेडफोन र अग्रभागमा स्क्रिन राखिएको थियो। अमेरिकन सिनेमाहरू नि:शुल्क देखाउने व्यवस्था थालिएको रहेछ। सुरु–सुरुमा त सिट पाउनै कठिन। पछि माथ्लो तल्लाको हलमै सिनेमा प्रदर्शन गर्न थाले। केही राम्रा सिनेमाहरू हेरें। ‘सिटिजन केन’, ‘प्लेसेस अफ द हर्ट’, ‘आउट अफ अफ्रिका’, ‘क्याजुअल्टी अफ वार’, ‘मानेक्वुइन’, ‘विलो’ आदि। प्लेसेस अफ द हर्टमा जन मल्कोभिजको दृष्टिविहीनको सशक्त अभिनयले द्रवित बनाउँछ। सिनेमा पनि दृश्य–पुस्तक न हुन्। सिनेमातिर रुचि जगाउने थोरै श्रेय यही पुस्तकालयलाई जान्छ।
यात्रा पाँच : ब्रिटिस लाइब्रेरी
त्यसै वर्षदेखि कान्तिपथस्थित ब्रिटिस लाइब्रेरी पनि जान थालेँ। अझ भव्य थियो, ब्रिटिस लाइब्रेरी। अमेरिकी लाइब्रेरीको विपरीत यहाँ कलेज वा स्कुलका विद्यार्थीहरू धेर देखिन्थे। लाइब्रेरी काउन्टरमा लन्डन कलिङ शीर्षकको ब्रोसर पाइन्थ्यो। बीबीसीको सम्पूर्ण कार्यक्रमको समयतालिका भएको। म त्यो लिइछाड्थें। समयतालिकामा रेजा लगाउँदै सुन्थें। लाइब्रेरीको सदस्य पनि बनें। केही पुस्तकहरू लगेर पढें। लगत्तै स्नातक तह पढ्न पोखरा जानुपरेकाले यो लाइब्रेरीको प्रयोग चाहे जति गर्न सकिनँ। केही पुस्तकको नाम भने सम्झन्छु। चाल्र्स डिकेन्सको ‘ओलिभर ट्विस्ट’, ‘द टेल अफ टु सिटिज्’, ‘डेबिड कपरफिल्ड’ र इमली ब्रन्टको ‘उडरिङ हाइट’ को अब्रिज्ड भर्जन। अब्रिज्ड भर्जन सरलीकृत संस्करण थियो। जर्ज अरवेलको ‘एनिमल फर्म’। अरू सम्झना भएन।
यात्रा छ : वन विज्ञान पुस्तकालय
विसं २०४७ देखि २०५० सम्म वन विज्ञानको पुस्तकालयसँग सहयात्रा गरे। यस पुस्तकालयमा समाचार पत्रिका नियमित पढिन्थ्यो। ‘साप्ताहिक विमर्श’, ‘सुरुचि’, ‘बुधबार’, ‘मूल्याङ्कन’ आदि। प्रारम्भमा साप्ताहिक विमर्श र अलिक पछि साप्ताहिक सुरुचिमा शिव अधिकारीको लेख पढ्थें। उनी संस्कृत शब्द बढी चलाउँथे। बोलीचालीको भाषाभन्दा परको शब्दहरूको प्रयोगले त्यति बेला म प्रभावित भएको थिएँ। लेखक खगेन्द्र संग्रौलालाई पनि यही समयदेखि पढें। संग्रौलाको लेखनशैलीको शक्ति अनुभूत गरें। वन विज्ञान पुस्तकालयमा विषयगत पुस्तक र जर्नलहरू नै बढी थियो। इकलजी, जुलजी, बोटनी, वाइल्ड लाइफ, फरेस्ट रिसर्च, स्वायल कन्जरभेसन। तर एउटा खण्डमा फिक्सनको पुस्तकहरू थियो। भुईंतलामा, काउन्टर नजिक। आधा दर्जन जति किताब पढें कि? अधकल्चो पढेको काफ्काको ‘एनिग्मा अफ अराइभल’ सम्झन्छु। काफ्काकै ‘अमेरिका’ पढें। हक्सलेको ‘ब्रेभ न्यु वल्र्ड’ पनि थियो। त्यो जसोतसो सक्काएँ। क्याम्पसकालीन बसाइमा गोरखापत्र बाजेको पसलबाट नेपाली आख्यान, कविता र निबन्धका पुस्तकहरू किनेर पढ्ने क्रम बढ्दै गयो।
यात्रा सात : युट्युब लाइब्रेरीमा
सातौं लाइब्रेरी नयाँ अवतारमा छ। यो पुस्तामा पुस्तकालय भौतिक संसारबाट साइबर संसारमा स्थानान्तर भएको छ। पूर्ववृत्ति पुस्तकालयहरू जमिनमा अडिएको थियो। यो इथरमा तैरिरहेको छ। फ्लोटिङ लाइब्रेरी। इन्टरनेटको विकासले यो सम्भव भयो। पुस्तकहरूले डिजिटल रूप धारण गर्‍यो। सुन्ने र हेर्ने, अडियो भिजुअल बुक चल्तीमा आयो। छिर्नेभन्दा पनि पुस्तकालय कनेक्ट हुने विषय बन्यो। सन् २०१५ देखि युट्युबको विशद् पुस्तकालयको भ्रमण गरिरहेको छु। जिज्ञासा भएको विषयमा कनेक्ट गर्‍यो। हेर्‍यो, सुन्यो। कहिलेकाहीं भिजुअल हेर्छु। प्रायश: अडियो किताब सुन्छु। युट्युब लाइब्रेरीमा के–के हेरें? सुनें? बीबीसीले सन् १९७८ मा निर्माण गरेको सात शृंखलाको डकुमेन्ट्री ‘द भोयाज् अफ चाल्र्स डार्बिन’ हेरे। गालापोगसको पाँचवर्षे रोमाञ्चक बिगल यात्रा। थोरै भए पनि डार्बिनियन विकासवाद बुझें। प्रकृतिको छनोट, अनुकूलता, म्युटेसन र प्रजातिको उत्पत्तिबारे धेरथोर बुझे। बाँदर हाम्रो पुर्खा रहेनछ। बरु हाम्रो र बाँदरका साझा पुर्खा रहेछ। प्राकृतिक स्थितिमा भेरिएसन अत्यन्त बिस्तारै घटित हुनाले एउटै जीवनकालमा त्यो देख्न असम्भव प्राय: रहेछ। त्यसैले इकलोजिस्टहरू फोसिलमा भर पर्छन्। जियोलजिकल टाइम पिरियडको स्केलको भेउ पाउन नसकिए डार्बिनियन विकासवाद भ्रमजस्तो लाग्ने बलियो सम्भावना छ। डार्बिनको दृढता र तथ्यप्रतिको उनको निष्ठाले प्रभावित गर्छ। बाबाका पछाडि धेरै कुद्ने नेपाली समाजमा डार्बिनियन सिद्धान्तको सान्दर्भिकता झन् बढ्दो छ। त्यस्तै रिचार्ड डावकिन्सको ‘द गड डेलुजन’ र ‘द एनिमिज अफ रिजन’ सुन्नुपर्ने पुस्तक छ। डावकिन्स इभलुसनरी जीवविद् हुन्। म विश्वस्त भएँ, समाज गरिबी र विभेदपूर्ण हुने एउटा मुख्य कारण आलोचनात्मक चेतको अभाव हो, जुन मूलत विज्ञानसम्मत चेतनाको मर्मलाई आत्मसात् गर्न नसक्दा हुन्छ।
पुस्तकका अनगिन्ती नाम छन्। वारेन बफेटको ‘स्नो बल’ र उनको पार्टनर चार्ली मन्जरको ‘पोर चार्ली एलमानक’। वारेन बफेट मैले किन यति ढिलो पढें? सोच्दा थकथकी मात्र लाग्छ। मन्जर, अर्का दिग्गज। मन्जरले कुनै पुस्तक लेखेनन् तर पिटर कफमेनले उनीबारे किताब लेखे। ‘पोर चार्ली एलमानक’। त्यसभित्रको ‘साइकलजी अफ ह्युमन मिसजजमेन्ट’ प्रिय पुस्तकअंश बन्यो। स्टिभ जब्सका सिर्जनात्मक बागीपन र जिम रोनको व्यावहारिक शिक्षाहरू। सुन जुको ‘द आर्ट अफ वार’। आइन्सटाइनका सापेक्षवादका सिद्धान्त। र, टेड टक्सका सेरिजहरू।
जिम रोन लेख्छन्, ‘स्टिल टाइकुन एन्ड्रु कार्नेगीले निजी फाउन्डेसनबाट सन् १९१९ सम्म अमेरिकामा झन्डै ३५०० पुस्तकालय बनाएका थिए।’ रोनको भनाइमा, पुस्तकालयप्रति अमेरिकीहरू उदासीन छन्। तीन प्रतिशत अमेरिकी मात्र पुस्तकालयको सदस्य छन्। कार्नेगीले सोचेका थिए, अमेरिकीहरू पुस्तकालयतिर ‘ड्राइभ इन’ गर्लान् तर अधिकांश ‘ड्राइभ बाई’ गरिरहेका छन्। पुस्तकालय छेउबाटै छट्किन्छन् तर छिर्दैनन्।
अघि पुस्तकालयसम्म सशरीर जानुपथ्र्यो। इन्टरनेटको कारण अहिले संसारकै विशाल पुस्तकालयहरू हाम्रो सामुन्ने छन्। त्यसैले डर पनि छ, हामी कहीं अल्छे हुँदै त गएका छैनौं। करिब एघार हजार वर्षको आधुनिक मान्छेको इतिहासमा यस्ता अवसरहरू कहिल्यै आएनन्। वर्तमान समयप्रति हामी कृतज्ञ हुनुपर्छ। गन्तीले जीवन एउटा हो। तर सम्बन्ध, अनुभव र ज्ञानको आदानप्रदानको दृष्टिले अहिलेको एउटा जीवन सय वर्षअघिको दर्जन जीवन बराबर छ। यसो हुनुमा पुस्तकहरूको पनि देन छ। पुस्तकालयजस्तो फराकिलो क्षितिजतर्फ उघ्रने आँखीझ्याल अर्को छैन। हामीहरूले सिसेरोलाई नबिराई सुन्नुपर्छ।
प्रकाशित : वैशाख ९, २०७४ १०:२६
वैशाख ९, २०७४ विनोद पाण्डे, कञ्चन अधिकारी
धनगढी — सगरमाथा धनगढी प्रमियर लिग (डीपीएल) क्रिकेटको फाइनलमा टिम चौराह धनगढीले विराटनगर किंग्सलाई १ सय ६० रनको लक्ष्य दिएको छ । एसएसपी क्रिकेट मैदान धनगढीमा टस जितेर व्याटिङ गरेको टिम चौराह धनगढीले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाउँदै १ सय ५९ रन बनायो ।
सगरमाथा धनगढी प्रमियर लिग (डीपीएल) क्रिकेटको उपाधि टिम चौराह धनगढीले जितेको छ । शनिबार टिम चौराह र विराटनगर किंग्सबीच भएको खेलमा विराटनगर विरुद्ध ६२ रनको जित निकाल्दै चौराहले उपाधि जितेको हो ।
एसएसपी कार्यालय क्रिकेट मैदान धनगढीमा भएको फाइनलमा टस जितेर व्याटिङमा आएको चौराले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाउँदै १ सय ५९ रन बनाएको थियो ।
जवाफी व्याटिङमा आएको विराटनगर किंग्सले १८.१ बलमा अल आउट हुँदै ९७ रन बनायो ।
टिम चौराहले ट्रफीसँगै १५ लाख रुपैयाँ नगद प्राप्त गरेको छ भने उपविजेताले ७ लाख रुपैयाँ नगद प्राप्त गरेको छ ।
१२ ओभरसम्म संघर्ष गरेको टिम चौराहका खेलाडीको व्याट त्यसपछि खुलेको थियो । आरिफ शेखले ५४ रन बनाए र उनले अमरसिंह रौटेलसँग ४ ओभरमा ६३ रन जोडेका थिए । आरिफले ३० बल खेली ४ चौका र ४ छक्का प्रहार गरे । राउटेलाले १५ बलमा ३ चौका र २ छक्का प्रहार गरी नट आउट ३१ रन बनाए ।
सौरभ खनाल ५ बलमा १ छक्का र १ चौका प्रहार गरी १४ रनमा नट रहे ।
विराटनगरबाट सुशील कँडेलले २ विकेट लिँदै प्रतियोगितामा आफ्नो विकेट संख्या १७ पुर्‍याए । उनले प्रतियोगितामा सर्वाधिक विकेट लिएका हुन् । ्
विराटनगरबाट प्रनित थापाले २७ र अमित श्रेष्ठले २६ तथा अनिल साह र दीपन्द्रसिंह ऐरीले १३/१३ रन बनाए । खेलको कुनै पनि समय विराटनगर किंग्स लक्ष्य तर्फ देखिएन ।
टिम चौराहका सुशन भारीले ३ विकेट लिए भने आरिफ र सौरभ खनालले २/२ विकेट लिए ।
खेलको म्यान अफ दि म्याच आरिफ शेख भए ।
सगरमाथा धनगढी प्रमियर लिग (डीपीएल) क्रिकेटको फाइनलमा टिम चौराह धनगढी र विराटनगर किंग्स भिड्दै छन् । फाइनल एसएसपी कार्यालय क्रिकेट मैदान धनगढीमा शनिबार ११ बजे सुरु हुने छ ।
आज बिहान टिम चौराहका कप्तान पारस खड्काले टस जितेका छन् । टस जितेर उनले पहिला व्याटिङ गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
हामी ट्विटरमार्फत प्रत्यक्ष अपडेटमा छौं ।
Tweets about "#DPL #BKvsTCD from:kantipurdaily"
पारस खड्काको नेतृत्वमा रहेको टिम चौराह धनगढीले लगातार चार खेल जितेको छ र राम्रो लयमा छ । शरद भेषाकवरको कप्तानीमा रहेको विराटनगर किंग्सलाई युवा खेलाडीको साथ छ र टोलीले बलियो प्रदर्शन गर्दै आएको छ । यही दुई टोली शनिबार सगरमाथा सिमेन्ट धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) क्रिकेटको फाइनलमा भिडदैछन् ।
दुवै कप्तानले फाइनल रोमाञ्चक हुने अपेक्षा राखेका छन् । धनगढीले लगातार चौथो खेल जित्नेक्रममा क्वालिफायर्स २ मा रुपन्देही च्यालेन्जर्सलाई ९२ रनले पराजित गरेको थियो । विराटनगरले क्वालिफायर्स १ मा रुपन्देहीलाई ३० रनले पराजित गरेको थियो ।
प्रतियोगितामा आफ्नो पहिलो खेल खेल्नेक्रममा पनि यही दुई टोली भिडेका थिए, जसमा विराटनगरले धनगढीलाई २३ रनले पराजित गरेको थियो । पहिला व्याटिङ गरेको विराटनगरले १ सय ३४ रन बनाउँदा जवाफमा आएको धनगढीले ९ विकेट गुमाई १ सय ११ रनमात्र बनाउन सकेको थियो ।
त्यसयता प्रतियोगितामा ठूलै परिवतर्न आइसकेको छ । पहिला व्याटिङ गर्ने टोलीले मात्र जित्ने शृंखलालाई विराटनगरले अत्तरियामाथि ८ विकेटको विजय हात पारि टुंग्याएको थियो । राउन्ड रोबिनमा कञ्चनपुरसँगको खेल विराटनगरले टस जितेर पहिला फिल्डिङ रोज्दै १० ओभर भित्र जितेको थियो । कुनै पनि टोलीले १ सय रन पनि चेज गर्न नसकिरहेको अवस्थामा काठमाडौं गोल्डेन्ससँगको इलिमिनेटरमा धनगढीले १ सय २७ रन विजयी लक्ष्य पाएर बनाएको थियो ।
प्रकाशित : वैशाख ९, २०७४ १०:२४